izay nambaran’ny dokotera Rasolofoniaina, manampahaizana Malagasy nianatra tany am-pitandranomasina fa tena mamono olona maro tokoa maneran-tany. Azo sorohana avokoa anefa ireny tranga misy ireny sady azo sitranina tsara. Tsy ilàna traikefa be fa rehefa olona mahay mamaky teny sy manoratra dia mety aminy. Hampianatra ny momba izay indrindra izy ireo ny 2, ny 3 ary ny 4 novambra ho avy izao etsy amin’ny Live hotel Andavamamba. Ny teknikan’i Gregori Grabovi, teratany Rosianina anisan’ny manampahaizana indrindra maneran-tany no hampianariny izay mifototra amin’ny fifantohana na “concentration”. Izay foy no harotsaka, hoy ny dokotera Rasolofoniaina raha mahatratra hatrany amin’ny 7 euros kosa raha kely ny saran’ny manatrika fampianarana goavam-be tahaka izao any ivelany. Notsindriany manokana moa fa hampianariny mandritra ireo telo andro ireo ihany koa ny teknika iadiana amin’ny fahanterana ka na 100 taona aza ny olona iray dia toy ny mbola vao 30 taona foana izy rehefa mazoto mampihatra ireo karazana teknika omena azy ireo. Tsiahivina fa omena ny mpandray anjara mandritra ity kaonferansa lehibe ity ihany koa ny fanalahidy entina hamonjena ny ain’ireo efa eo ambavahaonan’ny fahafatesana miampita arabe nefa tsy mahita izay fiara handona azy akory. Tsara ny manamarika fa betsaka tamin’ireo mararin’ny homamiadana tonga nanatona an’ny dokotera Rasolofoniaina no nambarany fa sitrana soa aman-tsara vokatry ny fampiasany io teknika hozarainy amin’ny mpiara-belona io.